Inona ireo fanontaniana sy valiny SEO mahakasika anao?
Raha vao manomboka mamolavola ny tontolon'ny SEO ianao, dia mety ho sahiran-tsaina tanteraka aminao ny zava-drehetra. Na dia misy lahatsoratra an-jatony ao amin'ny tranonkala manome torohevitra momba ny fomba fitaterana fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranonkalanao, ny sasany amin'izy ireo dia tsy misy ilàna azy, fa ny hafa kosa tsy manome fahatakarana mazava ny dikan'ny fikarohana.
Ny manam-pahaizana semalta dia mahatakatra ny maha sarotra azy ireo ho an'ny mpandahateny mba handinihana ny tontolon'ny SEO. Izany no antony nanapahantsika ny tsy hiditra lalina loatra amin'ireo singa ara-teknika amin'ny fikarakarana karazana fikarohana, fa tokony hampiakatra ny tanjona voalohan'ny SEO sy ny fototra fototra amin'ny tetikadiny.
Indreto izahay dia nanangona ny fanontaniana matetika momba ny SEO. Ny olana tsirairay dia miaraka amin'ny valiny mazava sy mendrika - aubainerie concept mode montreal. Vakio izy rehetra mba hahatakatra ny dikan'ny safidy fikarohana.
6 Top SEO Fanontaniana sy valiny
1. Ohatrinona ny vidin'ny SEO?
Ity iray ity dia miankina tanteraka amin'ny tanjonao sy ny tanjona farany. Ho an'ireo olona izay manomboka amin'ny fotokevitra, dia tokony haharitra 10-20 ora isan-kerinandro ny fanaovana ny ankamaroan'ny asa. Raha fehezina marina, ny fanentanana iray amin'ny tetibolam-bola rehetra dia tokony hiafara amin'ny famerenana bebe kokoa noho izay nampiasaina tamin'ny voalohany. Indray mandeha ihany, miankina amin'ny solon'anaranao sy ny vokatra antenainao.
2. Manao ahoana ny habetsaky ny fotoana?
Io ihany koa dia miova arakaraka ny fomba fijerin'ny tompon'ny tranokala. Amin'izao fotoana izao dia mamokatra afa-po vaovao indray mandeha isan-kerinandro ianao ary tsy manangona vola be na fotoana ampy, mety hahatratra herintaona mialoha ny hanombohanao hahita valiny mahatalanjona. Mifanohitra amin'izany, ireo lahatsoratra isan-kerinandro, ny fanorenana rohy voajanahary, ary ny fampiroboroboana votoaty dia ireo antony ireo izay hanampy anao hahita vokatra manan-danja ao anatin'ny volana vitsivitsy. Ho famintinana, ny fotoana lava kokoa hanohanana fanentanana, ny vokatra tsara kokoa ho hitanao. Tsotra toy izany.
3. Mila mahafantatra momba ny famokarana SEO aho?
Ity dia sarotra. Ny valiny dia eny ary tsia. Ny zavatra voalohany tokony hotadidina: tsy mila coding ianao raha te-hanomboka amin'ny SEO. Na izany aza, ny fitaovana ara-teknika sasantsasany dia mila fahalalana kely momba ny tranonkala. Ankehitriny, miresaka momba ny famaritana meta sy robots izahay. txt. Soa ihany, androany dia mora kokoa noho ny taona vitsy lasa izay mba ahafahanao miaraka amin'ny fotodrafitrasa fototra ho an'ny tenanao manokana amin'ny fanarahana ny tari-dàlana sy ny torolalana amin'ny Internet.
4. Raha toa ka tsy mamoaka algorithm amin'ny Google i Google, ahoana no ahafantarako ny fomba hametrahana azy?
Izy io dia mikasika ny fizahana sy ny fahadisoana na amin'ny fanandramana hafa. Ny fiarahamonin'ny SEO amin'izao fotoana izao dia tena mavitrika amin'ny fizarana ny valin'ny fitsapana sy ny lozam-pifaneraserana. Ny olona dia mahatakatra fa miaraka izy ireo ka afaka manatsoaka hevitra tsotsotra kokoa momba ny mety ho fiantraikan'ny fialantsasatra avy any, izay tsara.
5. Ahoana no fomba hifidianana votoatiny tsara?
Zava-dehibe ny mitadidy fa ny algorithms amin'ny alàlan'ny fikarohana dia miantehitra bebe kokoa amin'ny fikarohana semantika noho ny ataony amin'ny fanoritsoritana ireo teny manan-danja amin'ny fehezanteny mitovy amin'ny Internet. Na izany aza dia mety ho azonao atao ny mifidy ny teny fanalahidy havanana amin'ny lohahevitra anananao. Azonao atao mora foana izany amin'ny fikarohana ireo fanontaniana momba ny mpampiasa mahazatra eo amin'ny sehatry ny raharaham-barotra, ireo lohahevitra miresaka, ary ireo sehatra ara-barotra misy anao izay tsikaritrao fa tsy mifandray amin'ny mpifaninana aminao.
6. Inona ny "teny fanalahidy"?
Ny fitenim-pahefana Keyword dia dingana arahina amin'ny teny fanalahidy loatra na fehezanteny manan-danja amin'ny pejy na tranokala. Raha mampiditra teny fototra amin'ny fehezanteny tokana amin'ny lahatsoratra ianao dia mameno. Raha mamaky mafy ny lahatsoratra ianao ary misy fehezanteny sasantsasany hita matetika ao amin'ny lahatsoratra, dia mameno ianao. Miharihary ny vahaolana - aza maninona. Ratsy ho an'ny traikefa SEO sy ny mpampiasa anao izany.
Manantena izahay fa hahasoa ity lisitra "fanontaniana sy valiny SEO ity". Mahafinaritra ny mikaroka ny fototry ny SEO!